Kedu Job Ndị Ahịa Gị chọrọ Ngwaahịa ma ọ bụ Ọrụ Gị Iji Mee? | Martech Zone
Agara m nnukwu mmemme ụnyaahụ nke a kpọrọ Summit Innovation, nke ndị Indy na-etinye Nyocha. Clayton Christensen, ọkà okwu, prọfesọ, na onye edemede si Mahadum Harvard kwuru okwu Mmetụta Ọgba aghara ma rụọ ọrụ dị egwu. Otu n'ime isi ihe ndị o kwuru maka akụkụ ikpeazụ nke nkwupụta ya bụ banyere ịchọpụta ọrụ onye ahịa gị chọrọ ka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị rụọ.
O nyere ihe atụ nke mmiri ara ehi na otu, site na nyocha ahịa, otu ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ natara nnukwu ntinye gbasara ụtọ, ihe ndị ọzọ, na ihe ndị ọzọ, maka mmiri ara ehi ha. Mgbe emejuputara mgbanwe dabere na nyocha ha ha ahughi mgbanwe na ahia. Mgbe nyochachara ọzọ Christensen na ndị otu ya chọpụtara na ndị mmadụ na-azụ mmiri ara ehi n'ụtụtụ ka ha were oge n'oge njem ha dị ogologo ma nye ha oke afọ ojuju agụụ ruo mgbe ha rie ọzọ.
Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ na-anwa ime ka milkshakes ka mma ka ya na ndị ọzọ na-a competeụ mmiri, mana ndị ahịa ha anaghị ele anya na milkshakes na-asọ mpi, ha chọrọ milkshake iji rụọ ọrụ nke oge na-egbu egbu ma nyekwa obere agụụ enyemaka. Ya mere ndụmọdụ nke Christensen na ndị otu ya nyere abụghị ka ha mee ka mmiri ara ehi na-atọ ụtọ, kama ọ bụ a toro maa jijiji iji hụ na ọ ga-adịgide n'ofe njem ahụ dum!
Dị ka ndị na-ere ahịa ihe mgbaru ọsọ anyị na-akọwa ndị ahịa anyị - anyị na-etinyekarị ha na bọket dabere na data igwe mmadụ, omume onye ọrụ na isi ihe data ndị ọzọ na-enweghị ịlaghachi azụ wee jụọ ọrụ dị a doesaa ka onye ahịa m chọrọ? Na, ngwaahịa m ma ọ bụ ọrụ m ọ na-arụ ọrụ ahụ?
Kedu ka ị ga - esi chọpụta ọrụ ndị ahịa gị chọrọ ka ngwaahịa gị rụọ?
Were otu nyocha intaneti
Jiri Media Media ịlele ma gee ntị ka ndị ahịa si eji ngwaahịa a
Kwe ka ndị ahịa gị blọọgụ ọbịa na blog ụlọ ọrụ gị banyere otu ha si eji ọrụ / ngwaahịa
Kpọọ ha ka ha bịa nke gị webinar na-esote na enye ha 10 nkeji oge gosi ha ojiji nke ngwaahịa
Taa bu ezigbo ubochi dika o bula iju ajuju a ma lee ahia gi ma lee ma abuo di na egwu.
Tags: Chandlergoogle nyocha mobileisfjistjUsoro njikọ njikọigwe na-acha ọchaụgwọ ọrụ mmemmeWordPress